တိရိစ္ဆာန်ကြက်သားကြက်အတွက် mash feed စက်ရုံကိုထုတ်လုပ်သည်
Premix mash feed ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသို့မဟုတ် mash feed ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အမြဲတမ်းလှော်ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည်, ဖဲကြိုးရောနှောသို့မဟုတ် feed ကိုရောနှော, သုတ် bins. ကွင်းဆက်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မာကျောမှုနှင့်ဒီဇိုင်းတို့သည်ကြာရှည်စွာလည်ပတ်မှုအားပြwithoutနာမရှိဘဲအာမခံပါသည်
Premix mash feed ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသို့မဟုတ် mash feed ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အမြဲတမ်းလှော်ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည်, ဖဲကြိုးရောနှောသို့မဟုတ် feed ကိုရောနှော, သုတ် bins. ကွင်းဆက်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မာကျောမှုနှင့်ဒီဇိုင်းတို့သည်ကြာရှည်စွာလည်ပတ်မှုအားပြwithoutနာမရှိဘဲအာမခံပါသည်. Feed mixer ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအစာကျွေးခြင်းစက်ရုံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, premix feed ကိုစက်ရုံ, စက်ပစ္စည်းအစာကျွေး, ထို့အပြင်, အစာနှင့်မုန့်ညက်အပင်များ, နူးညံ့သိမ်မွေ့ရောစပ်၏အားသာချက်များနှင့်အတူစသည်တို့ကို, သွေဖည်ခြင်းမရှိ, မြင့်မားသောရောစပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း, လှပသောပုံသဏ္.ာန်, ဆူညံသံ, ဖုန်မှုန့်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမရှိပါ.
သီးနှံ / mash feed ကို
Mash အရည်အသွေးသည်၎င်း၏အမှုန်များ၏အရွယ်အစားနှင့်တူညီမှုအားဖြင့်အကဲဖြတ်သည်. အများအပြားသောစာရေးဆရာများကအစာအမှုန်အရွယ်အစားတိုးပွားမှုနှင့်အသားစားသတ္တဝါကြီးထွားမှုအကြားအပြုသဘောဆက်စပ်မှုရှိသည်, အပေါ် Nir အပါအဝင်0ရန်3တစ်ပတ်သားငယ်, နှင့်အကြား broilers အပေါ် Lecierc 22 ရန် 39 ရက်ပေါင်း.
ငှက်များသည်ပိုကြီးသောအမှုန်များကိုပိုနှစ်သက်ကြသောကြောင့်အမှုန်အရွယ်အစား၏ကောင်းမွန်သောတူညီမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ထို့ကြောင့်ကြီးစိုးသောငှက်များသည်ထိုပိုကြီးသောသီးနှံအမှုန်များကိုလျင်မြန်စွာစားသုံးလိမ့်မည်, ကျန်တဲ့ငှက်တွေကပိုသေးတဲ့အမှုန်တွေကိုစားမယ်. သို့သော်, အမှုန်ရွေးချယ်မှုသည်ငှက်များနှင့်ဟန်ချက်ညီညီပုံရသည်။ အစာစားခြင်းအတွက်သီးနှံ / အာရုံစူးစိုက်မှုစားသုံးမှုအချိုးသည်အစာကျွေးခြင်းတစ်ခုလုံးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။.
mash feed စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော mash feed features: